Hantida sanadka 10 Geospatial guuritaanka - Microstation Geographics - Oracle Spatial - Geofumadas
Febraayo, 2016 cadastre, Featured, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, qgis
Tani waa caqabad ku ah caado u ah mashaariic badan Cadastre iyo Cartography, taas oo 2000-2010 Microstation Geographics waqti isku dhafan sida engine xogta da'ayeen, ka fiirsaneysa inay sababo sida soo socota:
Maaraynta tiirarka wuxuu ahaa mid aad uwanaagsan, mashaariicda cadawga.
DGN waa qaab kale oo soo jiidasho ah, iyada oo la tixgelinayo muuqaalkeeda faylka isku midka ah, oo aan isbeddelin sanado 15, taas oo ka soo horjeeda noocyo kale oo aan aragno noocyo badan oo aan ku haboonayn saddexdii sanaba mar.
2002, software bilaash ah ayaa ah riyo aan fogeyn oo ah waxa aan maanta heysano.
Heerarka OGC ma aysan miisaamin xataa barnaamijyada macaamiisha ah.
Faylasha shp-ga waxay ku kooban yahiin mashaariic heer sare ah waxaana xarumaha xuduudaha ay weli xiran yihiin nidaamyo aan nidaamsanayn oo waxyeelloobay waxqabadka server ... iyo lacag.
Isgaadhsiinta fog waxay ahayd mid khatar ah marka la barbardhigo wixii aan hadda qabannay.
Sidaas daraadeed, fulinta GIS oo ku salaysan nidaamka "CAD" ee isku xiran waxay ahayd xal waara, inkastoo xaqiiqda ah in loo adeegsado ujeedooyin soojeedin oo soo jiidasho leh. API VBA waxay ahayd badan ilaa barnaamaj joogtada maamulka transactional xiran ProjectWise si loo xakameeyo files jirka iyo kartida ay u isticmaalaan GeoWeb Publisher for falanqaynta da'ayeen ka server ka, inkastoo la daabaco waa xadidan oo ay ku ActiveX ee Internet Explorer (taas oo sanad in uu ahaa kaliya browser).
Dhibaatada ma aha in ay si tartiib tartiib ah waxaad fartaan Wannaagga iyo halkii ay mari Server ama ka badan xooggan versions of Geospatial ProjectWise, oo raba in ay u noolaadaan GIS ka files jirka, qaadashada buuxda ee Oracle astaanta shati iyo awoodda si ay u horumariyaan. Sidaa daraadeed taasi waa tartankayaga.
1. Diiwaanka: Postgres, SQL Server ama Oracle?
Gaar ahaan, waxaan jeclaan lahaa midka koowaad. Laakiin marka aad soo food saartay nidaam ku jihaysan tahay adeeg transactional laakiin aan si fiican u shaqeeya, taas oo qayb ka ah macquulka ah iyo wadajirka waa sida PL in database ah, isbedel saldhig OpenSource ah ma aha deg-deg ah. Maya, haddii aadan maskaxda ku heynin inaad sameysato qaab cusub oo nidaamka aan ku jirin muddada dhow.
Sidoo kale ma ahan in la sameeyo tallaabo Talaal ah oo lagu xakamaynayo wax kasta oo urta macaamilka. Sidaa awgeed Oracle waa go'aan fiican, haddii ay si fiican u shaqeyneyso, haddii cabbirka iyo baahida uu ballaaran yahay, haddii ay si fiican u habaysan tahay, la ilaaliyey, iyo haddii taageerada la isticmaalayo. Mawduuc kale.
Sidaas awgeed waxa laga hadhay waxay ahayd in la horumariyo farsamooyinka xogta lagu hayo saldhigaan, adeegyo daabacan iyo qalab wax ku ool ah oo maareynta xogta vector.
Si loo xakameeyo doorarka iyo dadka isticmaala, kuwaas oo horay loo maareeyey ProjectWise, waxaa loo sameeyey aalado kala duwan oo loo oggol yahay:
Isticmaal dadka isticmaala iyo doorarka BentleyMap VBA.
Ka dhig qofka isticmaala xuquuqda maamulka, xaq u leedahay waaxyada iyo degmooyinka.
U gudbi xaqa saxda ah ee faylka mashruuca.
Xaq u lahaanshaha qalabka laga heli karo dhismaha, daabacaadda, daabacaadda, wadatashiyada iyo nidaamka maamulka. Sidan, codsiyada cusub oo kaliya ayaa la abuuray oo waxay u muuqdaan kuwa isticmaalaya iyadoo loo eegayo doorka gaarka ah ama meelaynta.
Guddi falanqayntan ayaa sidoo kale fududaynaya mashaakilada guud ee BentleyMap mashaariicda, sida soo galitaanka qaybaha iyo sifooyinka geedka ee lagu qeexay Maamulaha Geospatial ayaa u muuqda oo kaliya marka la galo.
Guddi ka mid ah arrimahan ayaa xalliya dhibaatooyinka fahamka yar iyo khataraha isticmaaleyaasha cusub ee u shaqeynaya sida Isticmaalka macluumaadka la Xiriira. Taas waa liis kale, sababtoo ah Bentley waxa uu si toos ah uula dhaqmaa Oracle Spatial, taas oo ah mid cajiib leh laakiin sidoo kale waa mid khatar ah haddii aadan haysan koontaroolka ganacsiga.
Sidaa darteed, tusaale ahaan, moduleka dhismaha wuxuu lahaa qalabkan soo socda:
Kalkaaliye Ku-Xigeenka Juqraafiga
Socdaalka Meeleynta Qadka
Tijaabi geeso badan
Dhoofinta Shp / CAD
Iibsiga Shp / CAD
Qalabka dhamaystirka ah ayaa lagu darey si tartiib tartiib ah, oo ay ka mid yihiin qaar si toos ah wax uga beddelaya Maamulaha Geospatial.
Maamulaha si aad u aragto sifooyinka
Isku bedel Cadaadiska LineString
Tafatir mashruuca Xfm
Ku dul qor waxyaabaha muuqda
Iyaga oo ay ku jiraan fasalada
Ku dhaji liistada liistada leh
2. Macluumaadka: Socdaalka DGN ee ku salaysan mawqif: Oracle Buider ama Bentley Map?
Caqabadaha ugu xiisaha badan ee tani waxay ahayd, in loo baahan yahay haajiraad la xakameeyay, iyada oo la tixgelinayo in faylasha DGN ee la cusbooneysiiyey in ka badan sanadada 10 ay yeelan karaan dhibaatooyinka daruuriga ah - dareen run ah -.
Dhab ahaantii waxay ahayd. Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee khariidaduhu waa halkan:
Isbedelka xuddunta ee xuduudda faylka (qaybta ama aagga) waxay tusineysaa in ay jiraan isbeddel labada ah, oo ay ka mid yihiin qulqulatada noodaha ee xaaladaha sida marka qaybta ay tahay xariiq hal keliya laakiin dariska xadka laysku daro.
Waxaa jira faylal ah ka dib markii macaamilka dayactirka 300 ee lagu keydiyay taariikhda DGN la jabin karo.
Waxaa jira dhibaatooyin badan oo adag oo aan lagu xakameyn karin golaha wasiirada, sida marka hantidu ay ku dhaafto deris kale fayl kale, qadarka aan lagu xallin karin khariidada, maadaama ay u maleeynayso in kormeerka goobaha si looga fogaado saameynta saamaynta saddexaad.
Dhaqannada xun, sida kaararka khariidadaha ee saadaalooyin kala duwan, kiiskan waxaa jiray qaybo ka mid ah NAD27, inkastoo heerka uu ahaa WGS84. Xaaladaha khatarta ah waxaa la sameeyay isbedelka u dhexeeya xogta laga helay saadaalooyin kala duwan, ilaa kuwa qallafsan.
Xalku wuxuu ahaa qalab nooca Wizzard ah oo loogu talogalay socdaalka xajmiga ah, kaasoo si shakhsi ahaan ah u guuri karo khariidad, dhowr ama xataa dhammaan degmada (hoolka magaalada) ama waaxda.
Asal ahaan waxa ah qalabku wuxuu qaataa macluumaadka mashruuca Juqraafi iyo kobcinta sifooyinka Khariidadda Benltey, ka dibna wuxuu samaynayaa taxane ah ansax ah, sida:
Mid ka mid ah hal xidhiidh oo ka dhexeeya joomatari iyo xogta,
Aqoonsi la'aan la'aanta waxyaabo badan,
Xaqiijinta mawqifka gobolka-centroid,
Xaqiijinta walxaha khariidada marka la eego walxaha aan firfircooneyn ee keydka macluumaadka,
Aqoonsiga saadka ee la xidhiidha kor-u-kaca hore ee saldhigga
Ka dib marka la ansixiyo, gudigu wuxuu u oggolaanayaa macluumaad ku darida hab aad u ballaaran, sida habka cabbirka iyo heerka tayada xakamaynta xogtaas.
Ugu dambeyntii, boostada database ah, ugu dambeyntii dhalin karo warbixin. From erayada si ay tallaabo waa meel fog ka wayn, laakiin uu ugu danbeyn laga beddelo si hawada Oracle astaanta mar dambe sidii Fogtahay sida Bentley iyo sida uu arko sirqoollada adag ama sirqoollada geesaha badan.
3. Daabacaadda: Geoserver ama MapServer? OpenLayers ama buug
Daaweeye ayaa la dhisay iyadoo la isticmaalayo OpenLayers iyo plugins qaar. Markii ugu horeysay ee sanadihii 10 ee ka tagay horumarinta qaybta booska, sawir cusub ayaa la arkay oo bedelay ActiveX of Publisher GeoWeb. Xeerka MapFish waxaa loo isticmaalay daabacaadda, geojson si loo xakameeyo geedka dambe, tan iyo Geoserver ayaa u adeegay lakabyada adeega ee OracleSpatial.
Ugu dambeyntii, beddelka teknooloojiyada waxaa la sameeyey iyada oo loo eegayo sawirka soo socda. Sida aad arki karto, isku-dar ah xeerka bilaashka ah, ilaalinta xogta macluumaadka iyo maareynta dhulka iyadoo la adeegsanayo software gaar ah.
4. Dhisidda iyo hagaajinta, waxay toos u dirtaa Oracle Spatial. Bentley Map ama QGIS?
Tani waa sheeko kale. Mashruuca Bentley wuxuu soo saaraa saldhigga hooyga ee saldhigga, taas oo dhalinaysa isku dhacyo haddii uusan la shaqeyn doonin Adeegga Muuqaalka Website-ga ah (WFS). Isku dhacu waa:
Sidee loo xalliyaa qawaani aan u oggolaanin inuu topolojigu isku rogo, haddii la diyaariyo iyo marka rabto in la diro wargelin ah in shayga uu saameyn ku yeesho?
Tani waxaa lagu xalliyaa iyada oo horay wax loogu beddelayo, si toos ah u habeyn iyo in la ansixiyo marka la soo dhajinayo, haddii wax ay ku guul daraystaan ​​in la soo celiyo dib loo soo celiyo macaamilkii la dhameeyay laakiin lagu guuleystay.
Dhibaato kale oo loo baahan yahay in la xalliyo ayaa ah soo galitaanka xogta weyn, iyada oo tixgelinaysa in isticmaalayaashu ay joojiyeen isticmaalka Geographics ayna leeyihiin mashaariic dhowr ah oo kor u qaadaya cadawga weyn.
Tani waxay ahayd mid fudud sababtoo ah kaliya qalab la mid ah ayaa la sameeyey si loo dhexgeliyo macluumaadka Microstation Geographics, oo sahlaya awoodaha BentleyMap iyo gacanhaye dheeraad ah.
image ayaa muujiyay sida qalab this waxaa la soo saaray, la dhegyadii qaar ka mid ah, sida abuurka iyo diiwaangelinta geesaha iyo mid noqoshada ee Puntoparcela sida liiska ka shaqeynayaan in kiiska habka ay u qiyaaso geesaha qaar ka mid ah ma gaarsiisan yahay heerka tayada qaarkood.
Defintivamente socodka this ahaa wanaagsan, sida users ogaado waxa qalab inta badan loo isticmaalaa. lagama maarmaan ah inay wax ka bedesho arinkii u dhexeeya maris ah ee kala duwan oo kasoo muuqday maamulka a heer Waxay ahayd, kor u qaadida faa'iidooyinka cusub inay iska ilaawaan ah shinka Microstation V8 2004, sida WMS, hufnaan iyo aqoonsiga hooyo billabo gudbiyo qoraalkii ugu dambeeyey; taas micnaheedu ma interoperability la KML, SHP iyo GML for xidiguhu ka.
In la mid ah waxaa loo sameeyey qalab loogu talagalay dayactirka cadastaroolka, isagoo haysta ikhtiyaarka tooska ah ee qaababka ama hoos u dhigaya inay ku soo noqdaan kiisaska adag.
5. Macmiilka degmooyinka oo loo marayo GML. QGIS ama gvSIG?
QGIS Laakiin taas, waa sheeko kale oo la sheego.
Post Previous«Previous Mashruuca Mashruuca Nidaamka Dhulka ee Latin America iyo Kariibiyaanka
Post Next Miisaanka Twilight TheNext »